पुडासैनीको आँशुको अवमूल्यन | रुपान्तरण
पुडासैनीको आँशुको अवमूल्यन
१ भाद्र २०७६, आईतवार १६:०१
काठमाडौं । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने समाचार र अनुसन्धानको पिरामिडमाथि चढेका छन । उनलाई त्यो पिरामिडमा चढाउन भरेंगकोे‌‍‌‌‌‌ काम गरेका थिए रविका सहयोगी शालिकराम पुडासैनी । उनले बलिन्द्रधारा आँशु बगाउँदै छोडेको भिडियो रेकर्डले लामिछानेलाई रातारात टेलिभिजनबाट अदालतको इजलाससम्मको यात्रा गराएको छ ।
सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका प्रस्तोता लामिछाने यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन । शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा लामिछानेका सहकर्मी युवराज कँडेल पनि अनुसन्धानका लागि प्रहरीको नियन्त्रणमा छन । विहिबार साँझ टेलिभिजनको कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएका लामिछानेको समर्थन र विरोधमा घाँटी सुकाएर नारा लगाउने पनि उत्तिकै छन । जिल्ला अदालत चितवनले रवि र उनका सहयोगीलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धानगर्ने म्याद प्रहरीलाई दिएको छ ।
सफलताको पिरामिड बनाउने, चढने र चढाउने पात्रहरुका कारण समाज विभाजित बन्न पुगेको छ । लामिछानेको पक्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका व्यक्तिहरु र स्वदेशकै केही युवाहरुको झुण्ड देखिएको छ । पुडासैनीको पक्षमा पनि सानो समुह देखा परेको छ । पुडासैनी पक्षको स्वर लामिछाने समर्थकहरुका अगाडि मधुरो छ । जे होस, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने लामिछाने सामाजिक सन्जाल र अनलाइन न्युज पोर्टलका हेडलाइनमा छाएका छन । दैनिक अखबारहरुले भने घटनालाई महत्व दिएका छैनन ।
हत्या की आत्महत्या ?
पत्रकार पुडासैनीको शव भरतपुर बसस्टपमा रहेको होटल कँगारुमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको हो । उनले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन वा झुण्डाइएको हो ? यसबारे पोष्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन । यसको निष्कर्षमा नपुग्दै प्रहरीले बरामद भएको भिडियो रेकर्डका आधारमा पुडासैनीलाई आत्महत्यागर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको अभियोग लगाई लामिछाने र कँडेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनामा संलग्न रहेकी नर्स अस्मिता रेग्मीलाई पनि हिरासतमा लिएकोछ । फरेन्सिक विज्ञको टोलीले पोष्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि धेरैमा द्धिविधा नरहला ।
२० औं शताब्दीको अन्त्यदेखि नै विश्वभर, अझ विशेषगरि, टेलिभिजनमा मिडिया ट्रायलको अभ्यास सुरु भएको हो । नेपालमा यसको प्रभाव बढाउन रवि लामिछानेले घाँटी सुकाउँदै आएका छन । उनको प्रस्तुति आलोचित हुँदै आएको छ ।
कानूनी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले पनि लामिछानेको कार्यक्रम प्रस्तुतिकरणको शैली कानुन विपरित भएको औल्याएका छन । नेपाल सरकारका सहसचिव सन्देश श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन, ‘मिडियाले नै दोषि/निर्दोषी ठहरगर्ने मिडिया ट्रायल गलत हो । चाहे त्यो हिजो उनले अरुका विरुद्ध गरेको बेला होस वा आज उनको विरुद्ध अभियोगलाग्दाको समयमा होस ।’
सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व न्यायाधीश पनि अहिले सडकमा समर्थन र विरोधमा उत्रिएको भीड अराजक र अपरिपक्व भएको टिप्पणी गर्छन । उनी भन्छन, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ’ भन्दैमा मनपरि बोल्न त पाईदैन नि । बोल्ने स्वतन्त्रता छ भन्दैमा अर्कालाई मनपरि ढंगले गाली गर्न मिल्दैन ।’
लामिछानेले अपराधगरे ÷नगरेको प्रमाणित वादी पक्ष अर्थात राज्यले गर्ला । शंकारहित तवरबाट अभियोगमा उल्लेख भएको घटना, घटनाको श्रृंखला, वारदात, मनशाय लगायतका पक्षमा प्रमाणित नहुँदासम्म शंकाको सुविधा लामिछानेले पाउँछन । अभियोग प्रमाणित गर्दा कुनै शंका देखिन्छ भने त्यसको फाइदा अभियुक्तले पाउने गर्छ । उ निर्दोष ठहरिन पुग्दछ ।
प्रमाण संकलनका क्रममा सर्वप्रथम रवि र उनको टीमबाट सृजित कार्यलाई शंका रहित तवरबाट प्रमाणित गर्नु पर्छ । प्रस्तुत प्रमाणबाट मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश सन्तुष्ट हुन सक्ने तर्फ अनुसन्धान केन्द्रीत हुनु पर्छ । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले यस घटनालाई औल्याउँदै सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन, समाजलाई हेर्दै कानून बन्नुपर्ने र कानुनलाई हेर्दै समाज चल्नु पर्ने आधारभूत मान्यतामा ह्रास आउँदै जानु सुखद मानिंदैन ।’
कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन । कानुनी राज्यमा कानुनलाई सहजढंगले कामगर्न दिनु पर्छ । अदालतको अनुमतिविना रवि र उनका सहयोगीलाई थुनामा राखेको होइन । उजुरी परिसकेको सन्दर्भमा कानुनभन्दा माथि वा उन्मुक्तिको सुविधा कसैलाई छैन । कानुनले तोकेको अधिकारीले अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्छ । उत्तेजना फैलाउने र सबुत प्रमाण संकलनमा विचलन तथा अवरोध आउने स्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन । कानुनी निरुपणको विषयमा सडकमा नारा लगाउनु आफैमा विवेकसम्मत गतिविधि होइन ।
समर्थक र विरोधी दुवैले धैर्य अपनाउनु पर्छ । महेन्द्रनगरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका घटनामा सुरक्षाकर्मीले दोषीको पहिचानगर्ने सामथ्र्य गुमाएको घटना अब दोहोरिनु हुँदैन । अनुसन्धान अपरिपक्व र अधुरो हुनुहुँदैन । रविका सहयोगी भनिएका पुडासैनीको मामिलामा यस खालको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन ।